Nozaraiko ny fomba nanangonana ny biraoko an-trano ho an'ny streaming mivantana sy podcasting. Ity lahatsoratra ity dia nisy fampahalalana amin'ny antsipirihany momba ny fitaovana natsangako… avy amin'ny birao mijoro, mic, arm mic, fitaovana audio, sns. Fotoana fohy taorian'izay, niresaka tamin'ny namako akaiky Jack Klemeyer aho, John Maxwell Coach sy Jack Nilaza tamiko aho fa mila manampy ny Ecamm Live ao amin'ny rindrambaiko misy ny lozisialy mba hahafahako mandeha mivantana.
Alakamisy 4 martsa 2021 Alakamisy 4 martsa 2021 Douglas Karr
Ity dia iray amin'ireo lahatsoratra malaza indrindra eto Martech Zone satria ny orinasa sy ny olona dia manaparitaka paikadin'ny votoaty horonantsary hananganana fahefana an-tserasera ary hitondra any amin'ny orinasany. Na dia iMovie aza dia mety ho iray amin'ireo sehatra malaza indrindra amin'ny famoahana horonantsary noho ny fampiasana azy mora, tsy iray amin'ireo sehatra fanovana horonantsary matanjaka indrindra izy io. Ary, fantatsika rehetra fa mahatsiravina ny fandraisam-peo avy amin'ny fakantsary finday na webcam